Ahoana ny fomba hamadihana ny Oneplus 2 ho lasa finday Linux miaraka amin'ny Ubuntu Touch (mora) | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fomba hamadihana ny Oneplus 2 ho lasa finday Linux misy Ubuntu Touch (mora)
Isaac | | Android, Tutorials / Manuals / Tips
UBports Foundation, ilay fikambanana mpanao asa soa alemanina ao ambadik'ity tetikasa ity, dia manohy manatsara ny traikefa ary manamora ny fahazoan'ireo mpampiasa maniry hametraka ity rafitra fikirakirana finday ity amin'ny fitaovan'ny Android. Porofon'izany ny vaovao UBports Installer ho an'ny Ubuntu Touch navotsotra izy ireo. Raha ny tena manokana dia ho mora kokoa ho an'ireo manana OnePlus 2, afaka manova mora foana ity terminal ity ho lasa finday Linux.
Fantatrao sahady fa ny Ubuntu Touch dia rafitra fiasa finday tena mahavariana, ary io fahatongavana noresahin'ny rehetra io dia mety ho tonga ary toa lasa hadinon'ny farany. Indrisy, Niato ny tetikasa Canonical taona maro lasa izay, saingy ity fototra ity dia nanaiky azy ary nitahiry azy velona, ​​ary koa nanamora kokoa ny fifindra-monina iOS na Android.
Ankehitriny dia misy UBports Installer vaovao na Ubuntu Touch Installer izay azonao ampidirina ao anaty ny rafitra fandidiana misy fitaovana manohana amin'ny ezaka kely indrindra, nefa tsy mila mandehandeha mametraka ROM vaovao amin'ny tanana ary miatrika risika raha misy zavatra tsy mety mandritra ny fizotrany ary lasa tsy misy ilana azy satria tsy hainao tsara ny fomba fihetsika.
Ity dingana ity dia azo atao am-pitoniana amin'ny Windows PC, macOS na avy amin'ny GNU / Linux. Tsy mila rafitra manokana akory ianao satria mandeha tsara amin'ireo sehatra ireo.
Hatramin'ny kinova UBports Installer 0.7.4-beta izay navoaka volana vitsivitsy lasa izay, dia nisy fiovana lehibe sy fanatsarana. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia ny mampiditra ny Finday smartphone OnePlus 2 eo anelanelan'ny lisitra tohanan'ny. Noho izany, raha manana iray amin'ireo maodely ireo ianao ary te hanome azy fiainana faharoa amin'ny Linux, azonao atao ny manaraka ireto dingana ireto hametrahana mora foana ny Ubuntu Touch.
Ny voalohany dia misintona ny farany azo antoka dikan misy, izay 0.8.7 amin'ny fotoana anoratana ity lahatsoratra ity. Raha te haka ny tsimbadika farany any ivelany dia araho fotsiny ireto dingana ireto:
Ampidiro ao amin'ny tranonkala ofisialy ity adiresy ity.
Ambany ary tsindrio ny bokotra fonosana te hisintona avy amin'ny UBports Installer ianao, na ho an'ny Windows, macOS na ho an'ny distro Linux anao. Raha ny amin'ny Linux, manana fonosana DEB, Snap, na Universal AppImage ianao, izay tianao.
Raha vantany vao misintona ilay fonosana ianao dia afaka apetraho ity fonosana ity tahaka ny ataonao amin'ireo fonosana hafa misy ireo toetra ireo. Ohatra:
Azonao atao ny manokatra ny DEB miaraka amin'i Gdebi hametrahana azy amin'ny sary na hampiasa ny manager manager avy amin'ny tsipika baiko.
Ho an'ny AppImage, omeo alàlana hanatanterahana izany ary kitiho indroa eo amboniny.
Raha vantany vao apetraka amin'ny distro anao ny zavatra manaraka dia ny manaraka ireto dingana hafa:
Run UBports Installer.
Ampifandraiso amin'ny PC amin'ny alàlan'ny tariby ny OnePlus 2 (eny) USB.
Ao amin'ny UBports Installer, kitiho Safidio amin'ny tanana ny fitaovana.
Ao amin'ny varavarankely vaovao izay miseho, safidio ny findainao izay kasainao hapetraka ao amin'ny Ubuntu Touch ary efa nifandray ianao, amin'ity tranga ity OnePlus 2.
Ankehitriny, amin'ny efijery manaraka, azonao atao ny mamela ny angon-drakitra misy azy na manova ny fantsona, izany hoe, ny OTA izay hapetrakao na haovinao. Ohatra, ny OTA-15 na ny tsimbadika vaovao raha tianao.
Vantany vao vita ny fanovana tianao, tsindrio hametraka hametraka ny rafitra.
Mandefa hafatra fampitandremana ho anao izy, tsy maintsy atao izany Continue hanohizana
Hanontany anao ny tenimiafina mpandrindra ny rafitrao izay tsy maintsy ampidirinao raha te hanohy.
Pulsa OK manaraka.
Tsindrio izao ny bokotra herinaratra segondra vitsy mandra-pahitanao ny efijery Start.
Ho hitanao fa misy hafatra miseho eo amin'ny efijery PC-nao izay tsy maintsy ataonao manaiky.
Raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia ho hitanao ny fisehoan'ny efijery samihafa amin'ny OnePlus 2 sy ao amin'ny UBports Installer. Tsy mila manao na inona na inona ianao, fotsiny hiandry.
Avy eo ny OnePlus 2 dia manomboka indray ary ny efijery fampidiran'ny Ubuntu Touch.
Izao dia mila mankafy ny Ubuntu Touch amin'ny terminal anao fotsiny ianao ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba hamadihana ny Oneplus 2 ho lasa finday Linux misy Ubuntu Touch (mora)
Enric dia hoy izy:
Salama, notanterahiko ny fametrahana toy ny antsipiriany etsy ambony amin'ny finday iray Plus 2 avy amin'ny solosaina finday miaraka amin'ny Arch Linux ary mora be sy haingana be ny fametrahana.
Misaotra tamin'ny lahatsoratra
Mamaly an'i Enric
Tonga ny PeerTube 3.1 miaraka amin'ny fanatsarana ny transcoding, ny interface ary maro hafa
MOS-P1: Mikaroka ny loharano malalaka misokatra sy mitombo an'ny Microsoft - Fizarana 1